Ity ve no mpikirakira ny Samsung Galaxy Note 20? | Androidsis
Izahay tsikelikely dia mianatra antsipiriany bebe kokoa momba ny mpikambana manaraka amin'ny fianakaviana Note an'ny mpanamboatra Koreana. Eny, toy ny isan-taona Samsung dia manomana ny iray amin'ireo fampisehoana amin'ny taona. Ary, amin'ny fomba ahoana no hitranga raha tsy izany, dia mivoaka tsikelikely ny fampahalalana bebe kokoa. Ny farany? ny processeur an'ny Samsung Galaxy Note 20.
Efa nolazainay taminareo izany endrika mety hananan'ny Galaxy Note 20 +, ankoatry ny fahafantarana fa ny terminal dia hatolotra amin'ny fomba ofisialy mandritra ny volana aogositra. Ankehitriny, hitanay izay ho ho sainam-pirenena vaovao ao anatin'ny fianakavian'ireo mpikirakira Samsung. Ilay voafidy hanao Galaxy Note 20 ho avy?
Ny processeur an'ny Samsung Galaxy Note 20 dia hitovy amin'ny an'ny Galaxy S30
Ary ny vaovao farany dia miresaka vaovao Exynos 992, modely ianao miaraka amin'ny fandrosoana farany ARM amin'ny cores sy sary, hanomezana vahaolana vahaolana sy fahombiazana lehibe mifanaraka amin'ny andrasana. Mba hanaovana izany dia fantaro fa tonga miaraka amin'ny core Cortex A78 izy ireo, fahita amin'ny SoC avo lenta, fa nanampy 20 isan-jato kosa ny zava-bitan'izy ireo raha ampitahaina amin'ny andiany teo aloha.
Ho fanampin'izany, ho avy izy io miaraka amin'i Mali G78 matanjaka, miaraka amin'ny 24 core miankina amin'ny fanapahan-kevitr'ilay mpanamboatra, heverinay fa ny havoana manaraka an'ny fianakavian'ireo phablets Samsung, dia hamirapiratra amin'ny hazavany ihany. Raha ny loharanom-pahalalana an-tsokosoko dia hatsangana ity maodely ity dingana 5 nanometera, noho izany dia hanana transistors marobe isika, manamafy a fiakarana miharihary eo amin'ny fahefana, ankoatry ny fahombiazan'ny angovo tsara kokoa, izay adika amin'ny bateria lehibe kokoa.
Tsy maintsy miandry hatramin'ny Aogositra isika hanamafisana ireo angona ireo, na dia asehon'ny zava-drehetra aza fa tena biby i Samsung Galaxy Note 20. Na dia, etsy ankilany, tsy afaka manantena kely noho ny telefaona amin'ity faritra ity ianao, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ity ve no mpikirakira ny Samsung Galaxy Note 20?
Ahoana ny fomba handaminana ny bitsika amin'ny app web Twitter amin'ny Android